Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Jabhad cusub oo dagaal doon ah oo Muqdisho looga dhawaaqay
Jabhad cusub oo dagaal doon ah oo Muqdisho looga dhawaaqay
XOL: Qaar ka tirsan warbaahinta Soomaaliyeed ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho ayaa lagu daabacay laguna sheegey urur cusub oo lagu sheegey JABHADDA BADBAADINTA SHACBIGA OGADENYA . Qoraalkan oo kusoo baxay Warbaahinta Shabelle Network Media ayaa lagu xusey ujeedooyinka ururkan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho.
Illaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysa balse waxaa loo badin karaa iney iska tahay mid aan sal iyo raad lahayn ama laga leeyahay ujeeddo kale oo aan wali soo bixin dibse laga ogaandoono.
Ujeedooyinka ururka looga dhawaaqey Xamar ayaa lagu sheegey iney yihiin sidan:
4) Inaan iskaashi ciidan iyo mid siyaasadeedba la yeelano dhamaan ururada kale ee la dagaalamaya cadawga.
Inkastoo aan la ogeyn dadka ay yihiin iyo ujeedada dhabta ah ee ururkan is magacaabay balse waxaa la odhan karaa Odhaahdii ahayd ” Timirtii horeba dab loo waa!” Qoraalkan iyo shaacitaanka ururkan ayaa kusoo aadaya xilli kuwii dagaalka doorka mooday ay qaarna heshiis galeen qaarna dantu ku qasabtey iney danahooda kala raacaan.